Posted by ကို Tranquillus | ဇန်နဝါရီ 20, 2018 | ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
အခြားသူများ၏အကြည့်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ မကြာခဏပြန်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ရှုပ်ထွေးသောအခြေအနေများမှတဆင့်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီ! သင်၏ဘဝတွင်ခြေလှမ်းလှမ်းလိုပါသလား။ သို့မဟုတ်သင်လူသိရှင်ကြားကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ပြပါသလား သို့မဟုတ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုရိုးရိုးလေးမေးပါ။ ၎င်းသည်လုပ်ရပ်သေးငယ်သည်ဖြစ်စေကြီးမားသည်ဖြစ်စေ၊ ဤကြောက်ရွံ့မှုကသင့်ကိုအကန့်အသတ်ဖြစ်စေ။ သင့်ကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ခွာနိုင်အောင်ပြန်လာနိုင်သည်။
ကောင်းစွာကူးစက်တတ်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအသိအမှတ်ပြုတစ်ဦးကပြဿနာ။ ဒါဟာရှေ့ဆက်ရွေ့လျားထံမှသင်တို့တားဆီးကြောင်းဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်, ကတစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်အေးခဲနိုင်သည်ကတိုက်ဖျက်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ? အဘယ်အရာကိုကကျော်လွှားပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြစ်ဆက်လက်အရပျ၌ခံရမည်လိုဦးမှာလဲ
ဒီဗီဒီယိုကို2မိနစ်နှင့်အတူ, သငျသညျအဘယျကွောငျ့, နောက်ဆုံးတော့တစ်ခုကိုကျော်လွှားနှင့်ရှေ့ဆက်ဖို့လွယ်ကူနိုင်ပါတယ်နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ ကြောက်လန့်ကိုမကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုတစ်ဦးဖန်တီးမှုဖြစ်ပါသည်, ထင်ယောင်ထင်မှားဒါကြောင့်တခြားလူစိတ်ပျက်သောအရာကိုသင့်ရဲ့ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်လုပ်ပါ။
ရိုးရှင်းပြီးသတိထားမိလာသောအခါသင်ခန်းစာများအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်လွယ်ကူ။ ထို့ကြောင့်ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းချမှတ်နှင့်သင့်ကိုကွောကျရှံ့င့်ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဣနြေ္ဒနှင့်စစ်မှန်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်း Allow!
ဒီဗီဒီယိုထဲမှာသင်ရုံ5အချက်များတှငျအဘယျကအခြားလူမျိုး၏ကွောကျရှံ့သောခုခံတွန်းလှန်ရန်ကူညီပေးပါမည်နှငျ့သငျနေ့စဉ်ဘဝအဆင်ပြေချောမွေ့ပါလိမ့်မယ် ... အပေါင်းတို့နှင့်ကြောင်းကိုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အကြံပြုချက်များကိုတွေ့လိမ့်မည်:
1) ထင်မြင်ယူဆ : သင်၏လူသားခငျြးရာအရပ်စဉ်းစားအချိန်မဖြုန်းတီးပါနဲ့။
2) ကတညီတညွတ်တည်းé ဖြေ - လူတိုင်းကိုစိတ်ကျေနပ်စေချင်တယ်ဆိုရင်၊ သင်ဟာဘယ်သူ့ကိုမှမနှစ်သက်စေပါဘူး
3) ကခါး-ငေး လောကီသားတို့သည်သင်တို့လှည့်ပတ် revolved လျှင်, ငါတို့သည်သိကြလိမ့်မယ် ...
4) နှိုင်းယှဉ် : လျော့နည်းကိုယျ့ကိုယျကိုအလေးပေးဖို့ relativize ဖို့သင်ယူခြင်း။
5) လက်ခံ မိမိန့်အသတ် Accept နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းအပေါ်ရှေ့ဆက်။
ကြောက်လန့်ဒူ Des Autres-အဘယျသို့အဆိုပါ Fight သည်အဆိုပါလျှို့ဝှက်ချက်များ Are လေးစားစွာ? ဧပြီလ 22nd, 2018Tranquillus
လွန်ခဲ့သောမြန်ပြီးတော့အကျပ်အတည်းကိုဒူပင်ပန်းပြင်းထန်တဲ့ မှစ. သာ. ကောင်း၏သင်ဟာ-ကိုသတိရပါ-Exit ကိုလေ့လာပါ
အောက်ပါတစ်ဦးက Failed ပြီးနောက်အောင်မြင်ဖို့